ဧ ၀ ံဂေလိတရား၏ပင်တေကုတ္တေပါဝါ
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ power ၀ ံဂေလိတရား
Jesus versprach seinen Jüngern: «Siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheissen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe» (Lukas 24,49). Lukas wiederholt das Versprechen Jesu: «Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheissung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen» (Apostelgeschichte 1,4-5) ။
ဂျူးလူမျိုးများသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ကိုတရား ၀ င်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သိနာတောင်ပေါ်တွင်theသရေလလူမျိုးနှင့်ပြုလုပ်သောပဋိညာဉ်စာချုပ်ကိုပေါင်းသင်းကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုပြည့်စုံသောနားလည်မှုရှိသည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်သူ၏အသင်းတော်မှလူမျိုးအားလုံးမှဘုရားသခင်နှင့်ပြုလုပ်သောပဋိညာဉ်တော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်သည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏လူသစ်အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ကို သတိရမိသည်– “သင်တို့မူကား၊ သင်တို့သည် ရွေးချယ်ခံရသော အမျိုးအနွယ်၊ တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ လူများပိုင်သော၊ သင်တို့ကို မှောင်မိုက်မှ အံ့ဖွယ်အဖြစ်သို့ ခေါ်တော်မူသောသူ၏ ကျေးဇူးတော်များကို ကြွေးကြော်ရမည်အကြောင်း၊ အလင်း »(1. ဓာတ်ဆီ 2,9).
Christen begehen diesen Tag im Gedenken an den Heiligen Geist, den sie gemeinsam zu unterschiedlichen Zeiten erhalten haben. Die Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, an dem Grundsätze eines gesunden und tugendhaften Lebens gelehrt werden; sie existiert zu dem Zweck, die Wohltaten Jesu Christi zu verkündigen und betont nochmals: «Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht» (1. ဓာတ်ဆီ 2,9).
ငါတို့အားလုံးဝိညာဉ်ရေးရာပြောင်းလဲတဲ့လူတွေဖြစ်လာချင်နေပေမဲ့ဒါကငါတို့မှာတစ်ခုတည်းသောပန်းတိုင်မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်ယာန်တွေမှာမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ် - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခွန်အားပေးထားတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြေငြာရန်နှင့်ကမ္ဘာတစ် ၀ ှမ်း၌သူ၏နာမကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသတင်းစကားကိုသယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဦး ဆောင်သောအသက်တာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည် - ယေရှုခရစ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ တန်ခိုးတော်နှင့်ကရုဏာတော်ကိုသက်သေခံသောအသက်တာ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ သစ္စာရှိသောခရစ်ယာန်အသက်တာသည်ဧဝံဂေလိတရား၏သက်သေခံချက်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသက်တာသည်သက်သေထူသည်၊ ဘုရားသခင်ကငါတို့၌အလုပ်လုပ်သည်ကိုအမှန်တရားကဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုလျှောက်လှမ်းခြင်း၊ သက်သေခံပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
Pfingsten war ursprünglich ein Erntefest. Die Kirche ist auch heute an einer geistlichen Ernte beteiligt. Die Frucht oder das Ergebnis des Auftrags der Kirche ist die Verbreitung des Evangeliums und die Verkündigung der Rettung der Menschen durch Jesus. «Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder: sie sind schon reif zur Ernte», sagte Jesus zu seinen Jüngern, als sie in Samaria waren. Schon hier sprach Jesus von einer geistlichen Ernte, bei der den Menschen das ewige Leben geschenkt wird: «Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf dass sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet» (Johannes 4,35-36) ။
Der Geist wurde nicht nur den Aposteln gegeben oder der neugegründeten Gemeinde als Ganzes. Jedem an Jesus gläubigen Christen ist der Heilige Geist gegeben. Jeder von uns soll ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus sein, weil seine Hoffnung auf Christus begründet ist, denn jeder von uns hat die Möglichkeit eine ermutigende Antwort für unsere Hoffnung zu geben. Nachdem Stephanus gesteinigt wurde, weil er von Jesus Christus gepredigt hatte, kam eine grosse Verfolgung mit einer noch grösseren Auswirkung über die Urgemeinde. Alle ausser den Aposteln flohen aus Jerusalem (Apostelgeschichte 8,1). Überall wohin sie sich zerstreuten, redeten sie das Wort und «predigten das Evangelium vom Herrn Jesus» (Apostelgeschichte 11,19-20) ။
လုကာသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဂျေရုဆလင်မှထွက်ပြေးလာသောခရစ်ယာန်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများစွာ၏ပုံကိုပန်းချီဆွဲသည်။ သူတို့အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံရရင်တောင်သူတို့ကနှုတ်ပိတ်လို့မရဘူး။ သူတို့ကအသက်ကြီးသူတွေ၊ လူတန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူး၊ သူတို့တစ် ဦး စီသည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသက်သေခံကြသည်။ သူတို့ကလှည့်ပတ်သွားလာနေရင်းဂျေရုဆလင်ကိုဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲလို့မေးကြတယ်။ မေးတဲ့သူတိုင်းကိုသူတို့ပြောမှာသေချာတယ်။
၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသီးဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ကစတင်ခဲ့သောဝိညာဉ်ရေးရိတ်သိမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒီလူတွေဟာအဖြေပေးဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးယနေ့စိတ်ထက်သန်မှုသည်ယနေ့အသင်းတော်၌စိုးစံသင့်သည်။ တူညီသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တပည့်များကို ဦး ဆောင်ခဲ့ပြီးယနေ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယနေ့အသင်းတော်ကို ဦး ဆောင်သည်။ ယေရှုခရစ်၏သက်သေဖြစ်ရန်တူညီသောရဲရင့်မှုကိုသင်တောင်းနိုင်သည်။